Kudzvinyirira masokisi - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Kumanikidza masokisi, yaimbozivikanwa sekurapa kumanikidza masokisi, vari inowanzozivikanwa kunge elastic masokisi muChina. Izvo zvinoshandiswa kurapa venous hosha dzemakumbo akadzika, makumbo akaonda uye kusimudzira venous ropa reflux kune mwoyo. Izvo zvakagadzirwa neAmerican dupont lycra uye inotumirwa kubva Japani.
Kazhinji pamusika chiyero pantyhose yakarukwa ukobvu unit, inozivikanwa se "Denier".Denier ndicho chinhu, iyo inogona kuyerwa mune gramu pa 9000 mita yefaira.Denier nhamba seyuniti kuverenga iyo yakakora fiber yejasi, Kukosheswa kukosha huremu hwakakwira uye hwakamisikidzwa yakasimba, Nhamba yekuzviramba yakaderera, zvinoreva kuti jira rakatetepa uye kubuda pachena kwakakwirira, zvichireva kuti Denier inonyanya kudzvinyirira, dzvinyiriro yakawanda, mhedzisiro yemakumbo akaonda ndeye zvirinani.
1. Kumira kwenguva yakareba: mudzidzisi, mapurisa emigwagwa, gwara rekutenga, beautician, chiremba, mukoti, nezvimwewo
2. Gara-ins kwenguva yakareba: Vashandi veIT, vashandi chena, vashandi vehurumende nevamwe vashandi vemuhofisi -- kumira kana kugara kwenguva refu: nekuda kwekufutisa kwemhasuru uye kukoka kwemasimba, kubuda kweropa mumakumbo hakuna kusununguka, uye kuwedzera kweropa kukwidza kunotungamira kune venous hosha dzemakumbo akadzika.
3. Vakadzi vane pamuviri uye vanhu vanonwa mapiritsi ekuzvara kwenguva yakareba -- kushanduka kwehomoni mumuviri panguva yekuzvitakura inowedzera huwandu hweropa nezvakawanda kupfuura 20%;Fetal uye kuwedzera uterine kudzvinyirira pelvic vein uye iliac vein, nguva yekuenda kumwedzi inowedzera, gumbo vein kumanikidzwa kunowedzera, kukonzera hemal kutenderera kusununguke, Huya nechirwere chepashure.
4. Nguva zhinji bhizinesi nzendo, vafambi vanofamba nendege, vafambi refu-refu mabhazi uye vatambi vemhepo -- mamiriro ehupfumi ekirasi, sezvazvinozivikanwa, inokonzeresa kushaya kweropa mumakumbo nekuda kwehuremu pakukwira kwakakwirira, inotungamira kune zvirwere zve venous zvedumbu rakadzika uye pulmonary embolism mune zvakakomba zviitiko.
5. Vanotyisa vanhu -- nekuda kweropa cholesterol rakawanda uye lipids, kuwedzera kweropa kuoneka uye kwakanyanya uremu, venous ropa rakaoma kudzoka pamoyo, inotungamira kune zvirwere zve venous zvemakumbo akadzika.
6. Vanhu vanotova nehutachiona hwehutachiona hwezvakadzika zvikamu -- nekuti iwo iwo maropa atotorwara kare, dzinofanira kurapwa kuti dzivandudzike kana chirwere ichi chirambe chichiwedzera.
7. Yakakura zviitiko zvekudzikira kwemukati wakadzika vein thrombosis -- varwere vane yakakura kushanda, bundu riri kukuvadza, hemiplegia, vakadzi mune yechitatu trimester, varwere vane yakadzika mhedzisiro kuputsa, varwere vane utachiona hwakakomba, vakweguru, nezvimwewo.
8. Iva nekuda kwekuumbwa kwemakumbo akanaka uye chaunga mushure me liposuction yemakumbo -- basa rekuvhara, kudzvinyirira, kusimudza makumbo, kudzivirira kusagging, kusimudza tambo yegumbo, kugadzirisa gumbo chimiro uye kuderedza gumbo kutenderera.